Nhau - Linyi Mexu Plastic Industry Co., Ltd. yakavambwa muna 2010
Linyi Mexu Plastic Industry Co., Ltd. yakavambwa muna 2010, iri muBancheng Town Industrial Park, Lanshan District, Linyi City, Shandong Province. Iri ibhizinesi remazuva ano rinotora indasitiri yemachira emasora semutungamiri uye inobatanidza tsvakiridzo yemumba neyekunze nekusimudzira, kugadzira uye kutengesa.
Mumakore achangopfuura, zvinoenderana nezvinodiwa nenyika dzekudyara kwezvakatipoteredza, kambani inoshandisa PP uye polypropylene raw materials kugadzira biodegradable kwezvakatipoteredza ekudzivirira kudzivirira machira. Kambani iyi ine mafekitori matanhatu emapazi, gumi nemaviri mitsara yekugadzira yemazuva ano, vashandi vanopfuura mazana maviri, kusanganisira gumi nevatanhatu vane hunyanzvi hweR & D vashandi, kuburitswa kwepamwedzi kwejira remashanga rinopfuura mazana maviri ematani. Zvigadzirwa zvinotengeswa kuMiddle East, Africa, South America nedzimwe nyika nematunhu, kuti nyika itengeserwe kunze kwenyika igopa mari yekunze.
Iyo kambani izere nesimba uye simba. Zvigadzirwa zvikuru zvekambani ndeizvi: Bhegi rakarukwa uye jira reuswa, zvese zvigadzirwa zvenharaunda uye zvekurima zvimwe zvakakosha "hupfumi" hunokosha, iko zvino kwese kwese kwehupenyu pasina bhegi rakarukwa, bhegi rakarukwa rinonyanya nyore kuhupenyu hwedu, mune zvekurima uye zuva nezuva. hupenyu, kwese kwese kunoonekwa kune mufananidzo webhegi rakarukwa, uye ese jira reuswa kune zvakanakira zvekurima zvakaringana chengetedza Basa, Inochengetedza nguva yekusakura uye kurerukirwa kwekushanda-kuponesa, jira rekusakura rinoita kuti kurima kuve nebudiriro iri nani.
Nguva uye zvinodiwa, kusangana nezvinodiwa nevatengi uye zvinotarisirwa, ita shuwa yekutevedzera zvinoenderana nemitemo, kuve nechokwadi chekuita kwezvigadzirwa zvedu, kunaka kwekutonga kwemazuva ano, chinangwa ndechekubvumirana nemhando yezvigadzirwa zvedu, kuzadzisa kudiwa kwemusika. , gara pamberi pekuvimba, usingagutsikane nemamiriro ezvinhu aripo, imwe neimwe pfungwa mukuchengetedzwa kwechirevo chekutanga, kuenderera mberi kwekuvandudza.
kambani, kubatana isimba, vakabatana sechinhu chimwe, vane simba simba, chikuru zvigadzirwa zvekambani: rakarukwa bhegi uye uswa jira, zvose zvigadzirwa nzanga uye kurima zvimwe zvinokosha anokosha "upfumi", ikozvino kwose kwose muupenyu pasina yakarukwa bhegi, uye uswa. machira asiwo mabhenefiti ekurima anochengetedza dambudziko uye kushanda nesimba.
Kudiwa kwemusika uye kuzivikanwa ndiyo kutungamira kwekambani uye chinangwa, linyi Meixu plastic Industry Co., Ltd. yakatsaurirwa kukupa iwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi.
Kusakura Mumucheka, Heavy Duty Weed Barrier, Biodegradable Weed Control Fabric, Weed Control Fabric Roll, Pp Woven, Mvura Inopindira uye Inofema Weeding Mucheka,